ပင်လယ်ပြင်အခန်း၌ Jacuzzi ပါသောဟိုတယ် - ဟိုတယ် BubbleBad
ပင်လယ်ပြင်အခန်း၌ Jacuzzi ပါသောဟိုတယ်
နောက်ဆုံးပေါ် update ကို: 09-2021
အခန်းတွင်း jacuzzi ပါသောဟိုတယ်များ
သင်, မင်းရဲ့လက်တွဲဖော်, အခန်းထဲမှာ jacuzzi.
ဒါပေမယ့်ရင်ခုန်စရာအပန်းဖြေခရီးတွေရောက်လာတဲ့အခါ, ကိုယ်ပိုင် jacuzzi ပါ ၀ င်တဲ့ဟိုတယ်အခန်းကဘာမှမဖြစ်ပါဘူး .
မင်းရဲ့မင်္ဂလာနှစ်ပတ်လည်ကိုကျင်းပနေတာဖြစ်နိုင်တယ်, ဟန်းနီးမွန်း , Valentine's Day (သို့) အံ့သြဖွယ်ရာသီတင်းကျွတ်ပိတ်ရက်မှသာ၊ ကိုယ်ပိုင် jacuzzi ပါသောဤဟိုတယ်များထဲမှနှစ်သက်ဖွယ်ကောင်းသောညကိုကြိုတင်မှာယူခြင်းဖြင့်မင်းရဲ့ပိုကောင်းတဲ့မင်းရဲ့စစ်မှန်တဲ့အချစ်ရေးခြမ်းကိုပြပါ။.
ပိုကောင်းသေး, မင်းရဲ့ခရီးရက်စွဲတွေမှာသင်ပြောင်းလွယ်ပြင်လွယ်ရှိလျှင်, မင်းရဲ့ jacuzzi ဟိုတယ်အခန်းတွေကိုစျေးသက်သက်သာသာနဲ့ရနိုင်မလား. ပြီးတော့အခမဲ့ဖျက်သိမ်းနိုင်တဲ့သဘောတူညီချက်တွေလည်းရှိတယ် , ဒါကြောင့်ကမ်းလှမ်းချက်တွေကိုကြည့်ပြီးစျေးနှုန်းနှိုင်းယှဉ်ဖို့မမေ့ပါနဲ့.
ကိုယ်ပိုင် jacuzzis များဖြင့်ဟိုတယ်အနည်းငယ်ကိုလောင်းရန်နှင့်သင်၏လာမည့်အချစ်ရေးခရီးကိုစီစဉ်ရန်စတင်ပါ .
ဂျော့ခ်ျတောင်းမြို့, ဘဟားမား: သင်၏လူပျိုစတိုင် jacuzzi ကိုရှာပါ
Jacuzzis သို့ရောက်သောအခါ, boek dan een panoramische penthouse villa met twee slaapkamers op Gdrand Isle, မာစတာအိပ်ခန်းတွင်စကျင်ကျောက်များထည့်ထားသောစည်ပိုင်းပါရှိသည်.
သင်စားလိုလျှင်ကျယ်ပြန့်သောအိမ်ကြီးများတွင်ပြည့်စုံကောင်းမွန်သောမီးဖိုချောင်များပါ ၀ င်သည်၊ လျှောမှန်တံခါးများသည်တောက်ပသောအပြာရောင်ရေပြင်များနှင့် Emerald Bay ၏ဆင်စွယ်ရောင်ကမ်းခြေသို့တူညီသောယခင်အတိုင်းကြည့်ရှုနိုင်သည်။, Greg Norman သည်ချန်ပီယံဂေါက်ကွင်းကိုလည်းဒီဇိုင်းထုတ်ထားသည်.
စုစုပေါင်းနှင့်သာ 78 ဗီလာ, အိပ်ခန်းတစ်ခန်းမှလေးခန်းအထိအရွယ်အစားရှိသည်, အချစ်ရေးအားလပ်ရက်တွင်သီးသန့်နေရန်ဤကြယ် ၄ ပွင့်ဟိုတယ်သည်မကြီးပါ.
လှုပ်ရှားမှုများအတွက်အပန်းဖြေစခန်းသည်အရာအားလုံးကိုစီစဉ်နိုင်သည်, တောဝက်များနှင့်ရေကူးခြင်းမှ snorkelling သို့, ရေငုပ်ခြင်းနှင့်ငါးမန်းများကို tagging ပြုလုပ်သည့်သုတေသနခရီးစဉ်များ.
မြင်ကွင်းကျယ် penthouse villa နှင့်အတူ2Grand Isle ရှိအိပ်ခန်းများသည်မာစတာအိပ်ခန်းတွင်စကျင်ကျောက်များထည့်ထားသည့်စည်ပိုင်းပါ ၀ င်သည်.
Grand Isle Resort & ရေပူစမ်း
နိုင်ပြီ4၏5ကြယ်များ
9,1 မြတ်သော (320 သုံးသပ်ချက်များ)
ကနေ $356 နှစ်ယောက်ခန်း / ည *
Bavaro ကမ်းခြေ, ဒိုမီနီကန်သမ္မတနိုင်ငံ:
ဇိမ်ခံ spa နှင့် Vegas စတိုင်ကာစီနိုနှင့်နိုက်ကလပ်
Hard Rock Hotel နှင့် Casino Punta Cana, Dominican Republic ရှိသကြားသဲဖြူ Macao ကမ်းခြေပေါ်တွင်တည်ရှိသည်, ကျွန်းပေါ်တွင်ဖွင့်လှစ်ရန်ပထမဆုံးသောအားလုံးပါဝင်သောဟိုတယ်ဖြစ်ခဲ့ပြီးယနေ့သည်အချစ်ရေးနှင့်ပါတီပွဲပြုလုပ်နေသည့်စုံတွဲများအတွက်အကြိုက်ဆုံးလွတ်မြောက်ရာနေရာဖြစ်သည်။- မင်းလိုချင်တဲ့အငွေ့အသက်.
ဤနေရာတွင်အပန်းဖြေမှုများတွင်အဆင့်မြင့် spa တစ်ခုပါ ၀ င်သည်, Vegas စတိုင်လ်ကာစီနို, chic ORO နိုက်ကလပ်တစ်ခုနှင့် 10 အများအပြားစားသောက်ဆိုင်များနှင့်ဘားများ.
ရေစိမ်ပြေပြစ်မှုအတွက်စကျင်ကျောက်ခင်းထားသောပင်လယ်သို့မဟုတ်တစ်ခုရှိသည် 13 ရေကန်များရှိသည်, အဲဒီထဲမှာရေကူးဘားလေးခုရှိတယ်.
ပြီးတော့အခန်းတွေရှိတယ်. Iedereen wordt geleverd met een jacuzzi voor twee personen die zich in een open plattegrond voor de bedden bevindt – het is absoluut ontworpen om sexy en koppelgericht te zijn.
အခန်းများကိုနတ်ကတော်များရောစပ်ကာအလှဆင်ထားသည်, စကျင်ကျောက်နှင့်ဖန်များအပါအ ၀ င်ကုတင်အထက်တွင်ရေးထိုးထားသောဒဏ္legendaryာရီသီချင်းများမှကိုးကားချက်များပါ ၀ င်သည်.
အခန်းတိုင်းတွင်လူနှစ် ဦး အတွက် jacuzzi ရှိသည်.
Hard Rock ဟိုတယ် & Punta Cana ကာစီနို
နိုင်ပြီ5၏5ကြယ်များ
9,3 မြတ်သော (33905 သုံးသပ်ချက်များ)
ကနေ $ 239 နှစ်ယောက်ခန်း / ည *
၎င်းသည် jacuzzi ၏တကယ်နှစ်သိမ့်မှုရလာသောအခါ, Cheeca Lodge ရှိရေပူကန်အစုံကိုအနိုင်ယူရန်ခက်သလား & Florida Keys မှာ Spa လုပ်ဖို့မလွယ်ပါဘူး .
Islamorada Key ရှိအပန်းဖြေစခန်းသည်၎င်းတို့၏စုံတွဲများအားရေနွေးကန်များကိုသမုဒ္ဒရာမြင်ကွင်းဝရံတာပေါ်တွင်ထားခဲ့ပြီး၎င်းတို့အားသီးသန့်လုံခြုံရေးဆွဲနိုင်သောကုလားကာများဖြင့်ကာရံထားသည်။, သင်လိုအပ်လျှင်.
ကမ်းခြေပိုင်ဆိုင်မှုဖြစ်သည် 27 ဟက်တာကို၎င်းကိုယ်တိုင် ဦး တည်ရာအဖြစ်ဒီဇိုင်းထုတ်ထားသည်.
Er zijn tal van eetgelegenheden met vier restaurants en bars – Atlantic’s Edge is het vlaggenschip-visrestaurant en een formele aangelegenheid die goed werkt voor het vieren van een speciale gelegenheid. ဟင်းလျာများကိုတီထွင်ဖန်တီးထားပြီးကာရစ်ဘီယံအရသာများကိုဇာတိ Florida Florida Keys ပါဝင်ပစ္စည်းများနှင့်ပေါင်းစပ်ထားသည်.
ဥပမာတွင်နဂါးမောက်သီးနှင့် hibiscus swordfish တို့ပါ ၀ င်သောအနီကင်ငါးပါးစာပါ ၀ င်သည်, ၎င်းသည်အရသာရှိပြီးနူးညံ့သည်.
လှုပ်ရှားမှုများနှင့်ပတ်သက်လာလျှင်, site ၌ရေကစားအားကစားရုံရှိပါသလား, ငါးမျှားတံ, တင်းနစ်ကွင်းများစွာ, ကိုးပေါက်ဂေါက်ကွင်း, စုံတွဲများအတွက်ပြီးပြည့်စုံသော cabanas ပါ ၀ င်သော spa နှင့်ရေကန်နှစ်ခု.
ဤကမ်းခြေအိမ်ရာသည်ကိုယ်တိုင်အတွက် ဦး တည်ရာတစ်ခုဖြစ်သည်.
Cheeca Lodge & ရေပူစမ်း
8.5 မြတ်သော (1778 သုံးသပ်ချက်များ)
ကနေ $ 219 နှစ်ယောက်ခန်း / ည *
Torch Key လေးပါ, ဖလော်ရီဒါ:
သီးသန့်ကျွန်းတစ်ခုပေါ်တွင် jacuzzi ပါသောဟိုတယ်တစ်ခု
Little Palm Island Resort တွင်ရရှိသောသီးသန့်စုံတွဲများသည်ဤကမ္ဘာမှဖြစ်သည်.
Florida Keys ကမ်းလွန်တွင်မျောနေသည်, ဧည့်သည်များအခမဲ့မော်တာရွက်လှေဖြင့်ဤသီးသန့်ကိုယ်ပိုင်ကျွန်းသို့လာနိုင်သည်, သူတို့ဆန္ဒရှိလျှင်ကိုယ်ပိုင်လှေ (သို့) လေယာဉ်ပျံဖြင့်သွားပါ.
ဘန်ဂလိုလေးတွေကကျွန်းငယ်လေးကိုအစကနေအဆုံးထိမြင်နိုင်တယ်, Newfound Harbor (သို့) Atlantic သမုဒ္ဒရာ၏မြင်ကွင်းတစ်ခုစီ.
jacuzzi ဝါသနာရှင်များအတွက်, Island Romance Suite ကိုယူရန်စဉ်းစားပါ, die een grote hot tub op het privéterras buiten en een diep ligbad binnenin biedt.
သုံးနိုင်သော suite နှစ်ခုကိုဧည့်သည်တော်များအတွက်အားလပ်ရက်အပန်းဖြေမှုအများစုရရှိစေရန်အထူးရွှေ့ပြောင်းသွားလာရန်လိုအပ်ချက်များနှင့်အတူအဆင်ပြေစေရန်ပြင်ဆင်ထားပါသည်။.
နေရာသည် ADA လိုက်နာမှုနှင့်အညီဧည့်ဝတ်ကျေပွန်မှုအတွက်ပြီးပြည့်စုံရန်ဆက်လက်ကြိုးပမ်းသည်, ချဉ်းကပ်လမ်းများနှင့်သုံးနိုင်သောရေကူးကန်ရေချိုးခန်းများအပါအ ၀ င်.
စိတ်အပန်းဖြေချင်သောဧည့်သည်များအတွက် romantic turndown ၀ န်ဆောင်မှုအမျိုးမျိုးကိုလည်းအပန်းဖြေပေးသည်, မွှေးကြိုင်သောရေချိုးခြင်းကိုနှစ်သက်ကြသလား, အအေးခံထားသောရှန်ပိန်သို့မဟုတ်နှင်းဆီပွင့်ချပ်အိပ်ခန်းသို့လမ်းလျှောက်ပါ.
ADA လိုက်နာမှုအတွက် suite နှစ်ခုကိုပြုပြင်ထားပြီးအထူးလိုအပ်ချက်များဖြင့်ဧည့်သည်များကိုကြိုဆိုသည်.
Little Palm Island အပန်းဖြေ & ရေပူစမ်း
သေးငယ်သော Torch Wrench
9,1 မြတ်သော (194 သုံးသပ်ချက်များ)
သီးသန့် Jacuzzi နှင့်ဟန်းနီးမွန်းခရီးကိုအကြိုက်ဆုံး
ကြိုးစားပြီးစစ်မှန်သောအကြိုက်ဆုံးဟန်းနီးမွန်းခရီးဖြစ်သည် , Aloha ပြည်နယ်သည်ပြည်မကြီးနှင့်အခြားပြည်ပမှချစ်စရာကောင်းစုံတွဲများဖြစ်သည်.
Het Outrigger Waikiki ကမ်းခြေအပန်းဖြေ , အနောက်ဘက်ခြမ်း ( ewa သည်ဒေသခံဘာသာစကားဖြင့်) သတ်မှတ်သည်, သူကတော့ Outrigger Waikiki Beach Resort ပါ , met directe toegang tot het ongerepte wereldberoemde stuk zand en branding.
Begin uw initiatie in het leven op het eiland door u over te geven aan een met rum gekruide Mai Tai of een speciale Tutu’s Moonshine en een rondje pupus (kleine hapjes) in de Hula Grill van het hotel.
မင်းရဲ့မဟာကိုငါတို့ကိုပို့နိုင်တယ် (ကျေးဇူးတင်ပါသည်) နောက်မှပို့ပါ.
Spa Tub နှင့်အတူ Deluxe Oceanfront Room နှင့်သင့်လျော်သော Honolulu ဟိုတယ်၌တည်းခိုပါ, ရေကိုအပေါ်စီးမှလသာဆောင်တစ်ခုနှင့်ပြည့်စုံသည်, king size bed နှင့်လိုအပ်သောအပူကန်အားလုံး.
ဟိုတယ်ဧရိယာတွင်ရေကူးကန်နှင့်နေရောင်ခြည်သုံးပါ, meld u aan voor een surfles of ga winkelen in de omgeving van Waikiki Beach!
Deluxe Kamer aan de Oceaan
De Deluxe Oceanfront Kamer is voorzien van een spabad en een balkon met uitzicht op het water.
9,2 မြတ်သော (9119 သုံးသပ်ချက်များ)
ကနေ $ 222 နှစ်ယောက်ခန်း / ည *
Bekijk ook onze gerelateerde artikelen:
ဟိုတယ်နှင့်အတူ Jacuzzi မြင်ကွင်း
Jacuzzi (သို့) ရေပူရေအေးကမ်းလှမ်းမှုများနှင့်အတူအဆင့်မြင့်ဟိုတယ်အခန်း
မင်းရဲ့ jacuzzi ဟိုတယ်အခန်းကိုမြန်မြန်နဲ့စျေးသက်သက်သာသာနဲ့အခုဘဲမှာလိုက်ပါ HotelBubbelBad.nl